La présente page de téléchargement du fichier a été vue fois. Taille du document: 4. Ary ny fanahin'Andriamanitra nanomba tambonin'ny rano. Dia nisy hariva, ary nisy maraina, andro voalohany izany.
La présente page de téléchargement du fichier a été vue fois. Taille du document: 4. Ary ny fanahin'Andriamanitra nanomba tambonin'ny rano. Dia nisy hariva, ary nisy maraina, andro voalohany izany. Dia nisy hariva, ary nisy maraina, andro faharoa izany. Ary hitan'Andriamanitra fa tsara izany. Dia nisy hariva, ary nisy maraina, andro fahenina izany. Chapitre 2 1 Dia vita ny lanitra sy ny tany sy izay rehetra ao aminy. Ary ny ony fahefatra dia Eofrata. Ary hoy izy tamin-dravehivavy: Hanky!
Efa nihinanao va ny hazo izay nandrarako anao tsy hihinananao? Dia hoy ravehivavy: Ny menarana no namitaka ahy, ka dia nihinana aho. Ary Abela dia mpiandry ondry, fa Kaina kosa mpiasa tany.
Ary Jehovah nankasitraka an'i Abela mbamin'ny fanatiny; 5 fa Kaina mbamin'ny fanatiny kosa tsy mba nankasitrahany. Dia tezitra indrindra Kaina, sady nanjombona ny tarehiny. Ary nahoana no manjombona ny tarehinao? Fa raha tsy tsara toetra kosa ianao, dia mamitsaka eo am-baravarana ny ota; ary ianao no kendren'ny faniriany, kanefa ianao no tokony hanapaka azy.
Fa hoy izy: Asa; moa mpitandrina ny rahalahiko va aho? Ny feon'ny ran'ny rahalahinao mitaraina amiko avy amin'ny tany. Ary Jehovah nanao famantarana ho an'i Kaina; mba tsy hisy hamono azy izay rehetra hahita azy. Chapitre 6 1 [Noa sy ny Safo-drano] Ary raha vao nihamaro ny olona tambonin'ny tany ka teraka zazavavy maro, 2 dia hitan'ny zanak'Andriamanitra fa tsara tarehy ny zanakavavin'ny olona; ka dia nifidy vady ho azy tamin'izy rehetra araka izay tiany izy.
Ary ny biriky na taony solombato, ary ny asfalta nataony solon-drihitra. Chapitre 12 1 [Ny niantsoan'Andriamanitra an'i Abrama sy ny nivahinianay tany Kanana sy Egypta] Ary hoy Jehovah tamin'i Abrama: Mandehana miala amin'ny taninao sy ny havanao ary ny tranon'ny rainao hankany amin'ny tany izay hasehoko anao; 2 dia hahatonga anao ho firenena lehibe Aho sady hitahy anao sy hahalehibe ny anaranao; ary ho fitahiana tokoa ianao; 3 ary hitahy izay manisy soa anao Aho, fa hanozona izay manozona anao; ary aminao no hitahiana ny firenena rehetra ambonin'ny tany.
Dia nanorina alitara teo izy ho an'i Jehovah Izay niseho taminy. Nahoana no tsy nambaranao tamiko fa vadinao izy? Chapitre 13 1 [Ny nisarahan'i Abrama sy Lota, ary ny teny fikasana nataon'Andriamanitra tamin'i Abrama] Ary Abrama dia niakatra niala tany Egypta, dia izy sy ny vadiny mbamin'ny fananany rehetra, ary Lota koa niaraka taminy, ho any amin'ny tany atsimo.
Dia nomen'i Abrama azy ny ampahafolon'ny zavatra rehetra. Chapitre 15 1 [Ny nanaovan'Andriamanitra fanekena tamin'i Abrama] Rehefa afaka izany, dia tonga tamin'i Abrama ny tenin'i Jehovah tamin'ny fahitana ka nanao hoe: Aza matahotra, ry Abrama; Izaho no ampinganao sy valimpitia lehibe indrindra ho anao. Dia hoy Izy taminy: Ho tahaka izany ny taranakao. Chapitre 16 1 [Ny nahaterahan'Isimaela] Ary Saray, vadin'i Abrama, tsy mba niteraka; ary izy nanana mpanompovavy Egyptiana, Hagara no anarany.
Dia neken'i Abrama ny tenin'i Saray. Ary raha nampahorin'i Saray Hagara, dia nandositra ny tavany izy. Ary hankaiza? Ary hoy izy; Mandositra ny tavan'i Saray tompovaviko aho. Ary hoy izy telo lahy: Ataovy ihany araka izay nolazainao.
Ary hoy kosa izy: Indro, ao an-day izy. Ary Saraha nandre izany teo am-baravaran'ny lay, izay teo ivohon'Ilay niteny. Amin'ny fotoan'andro raha avy ny taona toy izao dia hiverina aminao Aho, ary Saraha hanana zazalahy. Fa hoy Ilay niteny: Tsia; fa nihomehy mihitsy ianao. Ary hoy Izy: Tsy handringana Aho, raha mahita dimy amby efa-polo ao. Ary hoy Izy: Tsy mba hanao izany Aho noho ny efa-polo. Ary hoy Izy: Tsy mba hanao izany Aho, raha mahita telo-polo ao. Ary hoy Izy: Tsy mba handringana azy Aho noho ny roa-polo.
Ary hoy Izy: Tsy mba handringana Aho noho ny folo. Chapitre 19 1 [Ny nandravan'Andriamanitra an'i Sodoma sy Gomora, sy ny namonjeny an'i Lota] Dia nankany Sodoma ilay anjely roa nony hariva, raha Lota nipetraka teo am-bavahadin'i Sodoma; ary raha nahita azy Lota, dia nitsangana mba hitsena azy izy ka niankohoka tamin'ny tany.
Fa hoy izy roa lahy: Tsia; fa hitoetra eto an-kianja ihany izahay anio alina. Dia nanosika mafy an-dralehilahy izy ireo, dia an'i Lota, ka nisesika hamaky ny varavarana. Fa nataon'ny vinantony ho tahaka ny mpanao vazivazy izy. Izany no nanaovana ny anaran'ny tanàna hoe Zoara.
Ary nipetraka tandrifiny izy, dia nanandratra ny feony nitomany. Aza matahotra, fa efa ren'Andriamanitra ny feon'ny zaza eo amin'ny itoerany. Ary hoy izy: Indreto ny afo sy ny kitay; fa aiza kosa izay ondry hatao fanatitra dorana? Andriamanitra no hahita izay ondry hatao fanatitra dorana; dia niara-nandeha izy mianaka.
Ireo valo ireo no naterak'i Milka tamin'i Nahora, rahalahin'i Abrahama.
Taille: Ny ramevanao koa andeha hantsakako hosotroiny ambarapahatapiny misotro. Ny tenako no nianianako, hoy Jehovah: Indro, efa nanendry anao hanapaka ny tany Egypta rehetra aho. Vadiny io; malwgasy hovonoiny aho, fa ianao kosa hovelominy.